Jose Ferreira Neto “Neymar ciyaaryahan ma ahan ee waa… – Gool FM
Jose Ferreira Neto “Neymar ciyaaryahan ma ahan ee waa…
(Sao Paulo) 04 Maarso 2019. Xidiggii hore ee kubadda cagta Brazil Jose Ferreira Neto ayaa cambaareeyay qaab ciyaareedka laacibka xulka Brazil iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Faransiiska Neymar Junior.
Neto oo wareysi siiyay barnaamijka ‘Esporte Interativo’ ayaa waxa uu xusay in Neymar uu ka fog yahay heerka maanta ay taagan yihiin Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
“Neymar wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda caalamka, laakiin ma aragtay marka uu Messi ka hor ciyaarayo Real Madrid, ma daawatay Messi markuu la ciyaarayo Sevilla? Ama Cristiano Ronaldo oo 33 jir ah sida uu Juventus ugu dheelayo? Waa dhaliyaha ugu goolasha badan Serie A-da” ayuu yiri ciyaaryahankii hore ee Brazil Neto oo haatan falanqeeya ciyaaraha.
“Neymar ma ahan ciyaaryahan, waa nin caan ah waase mid nacas ah, kama hadli kartid isaga waayo aabihiis horey ayuu ka caroonayaa” ayuu sii raaciyay Neto.
Wax kale iska daaye laacibkii hore Neto waxa uu Neymar ku eedeeyay ka hariddii Brazil ee koobkii Adduunka 2018, waxaana uu yiri “Koobkii Adduunka waxaan uga harnay isaga dartiis, wuxuu u ciyaaraa si nacasnimo ah.
Dhanka kale Neymar oo haatan ku sugan Brazil maadaama uu dhaawac cagta ah qabo ayaa waxaa kooxdiisa PSG ay lugtii labaad ee 16 dhammaadka Champions League la ciyaari doontaa Arbacada kooxda Manchester United, iyadoo lugtii horena 2-0 ay ku badisay PSG.
Solari oo si RASMI ah ugu dhawaaqay Liiska xiddigaha Real Madrid ee kaga qeyb galaya kulanka Ajax… (Yaa Ka Maqan Yaase Ku Soo Baxay?)